Women Committee – Page3– CTUM
Workshop on Gender issues for women committee and active members of IWFM with the help of IndustriALL. (24 25 May 2019) in Yangon. မြန်မာနိုင်ငံကုန်ထုတ်နှင့်စက်မှုလက်မှုအလုပ်သမားများအဖွဲ့ချုပ် IWFM ၏ […]
ယနေ့ ၅.၈.၂၀၁၈ အမျိုးသမီးစင်တာတွင်ပြုလုပ်သော တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ ဟောပြောပွဲပုံရိပ်များ ဟောပြောပွဲသို့ Care Myanmar မှ Dr နန်းလျှန်ဇာမှ မိမိတို့၏နေ့စဉ် ဂရုစိုက်သင့်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး နှင့်ပါတ်သက်သောသိသင့်သိထိုက်သော အကြောင်းအရာများ ကျန်းမာရေးနှင့်ပါတ်သက်သော လိုက်နာရမည့်အချက်များ စသည်တို့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးသွားပါတယ် ဒေါက်တာကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ ဟောပြောပွဲသို့ အမျိုးသား(၄)ဦး အမျိုးသမီး(၂၆)ဦး စုစုပေါင်း(၃၀)ဦးတက်ရောက်ကြပါတယ် တက်ရောက်သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ CTUM […]
၁၅၊၇၊၁၈ တနင်္ဂနွေနေ့CTUM Women Centerမှာ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့် သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အကြောင်းကို MSI (Marie Stope International) မြန်မာမှ ဒေါက်တာ ရာဇာထွန်း၊ ဒေါ်နန်းယုလှိုင်၊ ဒေါ်ဇာနည်ထိုက်တို့ မှ ဟောပြောပွဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကာကွယ်ခြင်း၊ မိသားစုစီမံကိန်းအကြောင်းများကို အကျယ်တ၀င့် ဟောပြောပေးခဲ့ပြီး […]